सनक- मनिषा गौंचन | साहित्य संगालो
सनक- मनिषा गौंचन
Posted on January 7, 2018 by मनिषा गौंचन
हो, म उसको हत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको छु । यसका कारणहरू निम्न छन्,
उसका आँखाले आक्रमण गरेको पहिलो दिन, पूर्वमा घाम पहेँलो पहेँलो भएर उदाउँदै थियो । अस्पतालको क्याबिन नम्बर २०८ मा म मेरी बिरामी आमाको कुरुवा भएर बसेको थिएँ । आमा कुनाको बेडमा निदाइराख्नुभएको थियो । क्याबिनमा अक्सिजनको पाइपभित्र उहाँको सास खेलिरहेको मधुरो आवाज गुञ्जिरहेको थियो । झ्यालनिर म एउटा किताबका पानाहरू पल्टाउँदै थिएँ । त्यही झ्यालबाट देखिने गरी ऊ दायाँतिर लागेकी थिई । हिँडदाहिँड्दै उसले नपत्याउने गरी मेरा आँखामा आफ्ना आँखाका किरणहरू छोडिदिएकी थिई । उसले छोडेका किरणहरूको मातमा म एउटा रंगीन दुनियाँ सिर्जना गर्न पुगिसकेको थिएँ । त्यो दुनियाँ नितान्त आश्चर्यजनक थियो जहाँ स्वप्नील रंगहरू उसको आगमनका लागि झ्नझन् गाढा हुँदै घुल्न थालिसकेका थिए । मेरो मनमा चाह पलायो, ऊ फेरि मेरै झ्यालको साइडबाट बायाँ मोडियोस् । फेरि दायाँ मोडियोस् । फेरि बायाँ, फेरि दायाँ । यसरी ओहोरदोहोर गरिरहँदा फेरि पनि ती आँखाहरूबाट किरण मेरो आँखामा सरोस् । म खुसीले उज्यालिन सकुँ । खै के थियो त्यो नजरमा त्यतिबेला म अझै सोचमग्न छु । तर, अहिले भने सिर्फ यस्तो लागिरहेछ ती आँखा विषालु थिए…।
उसँग बोलेको पहिलो दिन, म अस्पतालकै कोरिडरमा आमाको लागि औषधिको लिस्ट बोकेर फार्मेसीतिर जाँदै थिएँ । ऊ हुत्तिँदै आई । मसँग ठोक्किई । उसको हातमा रहेका फाइलहरू भुइँमा छरिए । ऊ फेरि पनि मेरो आँखामा उसका आँखाका किरणहरू छोड्दै भुइँतिर निहुँरिइ र फाइल उठाइ अनि भनी ‘सरी’ । यो एउटा शब्दले पनि कसरी बोक्न सकेको उसको आवाजको दम । साँच्ची उसले यत्तिमात्र बोल्दा पनि म भित्र कस्तो अनौठो स्फूर्ति छाएको ! मानौं, दिनभरको घामले लल्याकलुलुक भएको एउटा बिरुवा झाझरबाट झरेको पानीको बुँदले बिउँतिएझैँ । मेरो मनमा चाह पलायो, फेरि पनि उसैगरी ऊ ठोक्किन आओस् र भनिरहोस् ‘सरी…सरी …सरी’ । ऊ गई । मेरो मन मस्तिष्कभरि एउटा धुन छोडेर गई । म हरदम त्यो धुनकै लयमा एकोहोरो भइरहेँ । जुन कुनामा जाँदा पनि त्यो आवाजले मलाई छोडेन या भनुँ मैले त्यो आवाज छोड्न सकिनँ । यस्तोसम्म भएँ, लाग्न थाल्यो मलाई स्केजोफ्रिनिया भएको छ । म आवाजको भ्रमहरूमा क्षत्विक्षत हुँदैछु र पनि मीठो मानी मानी सुन्दैछु । तर, यतिबेला भने यस्तो लागिरहेछ म उसको आवाजको भोल्युम नै म्युट गरिदिउँ ।
ऊ फेरि पनि त्यही करिडोर हुँदै आई । हातमा पानीको बोतल लिएर उभिरहेको थिएँ म । एकपटक पुलुक्क हेरी । उसको नजर नै त काफी थियो मेरो मन मस्तिष्कलाई म आफैंबाट उडाएर लैजान । ऊ मुसुक्क मुस्काई । उसको मुस्कान त्यत्तिकै शक्तिशाली थियो जसले मभित्रको जिद्दी ‘म’ लाई तुरुन्तै काबुमा ल्यायो । ऊ हिँड्ने कोरिडोर हुँदै म उसको मुस्कान पछ््याउन थालेँ । लालुपाते जस्ता दुई पातला ओठहरू मेरा आँखाहरूमा टाँसिएझैँ लाग्यो । एकपटक बायाँ हत्केलाले दुवै आँखा हल्कासँग थिचेँ । हुन सक्छ म ती लालुपाते ओँठलाई आँखाबाट टिपेर कतै लुकाउन चाहन्थेँ या क्याबिनका भित्ताहरूमा सजाउन चाहन्थेँ । हो, नजानी नजानी उसको मुस्कानको नशाले म लठ्ठिँदै थिएँ । हेर्दाहेर्दै ऊ त्यहाँबाट कतै गइसकेकी थिई । मेरो हातको पानीको बोतल रित्तिसकेको थियो । थाहा भएन, कतिबेला मैले पानी रित्याएँ । मेरो चिउडोमुनिको सर्टको भाग भने रुझेको थियो । उसको मुस्कान खोज्ने म यतिबेला भने त्यो मुस्कानको दुश्मन भएको छु । अथवा, त्यो मुस्कान मेरो दुश्मन भइदिएको छ ।
पहिलो पटक उसलाई छोएको सम्झेँ । सम्झनु पनि पर्दैन आफैं छाइदिन्छ मस्तिष्कभरि । ऊ हाम्रो क्याबिनमा आएकी थिई । पाठेघरमा समस्या र फोक्सोमा पानी जमेर बिरामी परेकी मेरी आमा नसाबाट औषधि लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सजिलोसँग औषधि नगएपछि मैले नै मेडिसिन ‘सी’ मा फोन गरेर नर्सलाई बोलाएको थिएँ । केहीबेरमै ढोका ढकढक गरेको आवाज आयो । ढोका खोल्दा सामुन्ने ऊ नै त थिई । मलाई हेरेर ऊ मुसुक्क मुस्काई । उसको गालाको अलि तल्लो भागमा रहेको गाढा खैरो कोठी तन्किएर लाम्चो भयो । ऊ झनै राम्री देखिई । ऊ सरासर भित्र आई । औषधि पास गर्ने क्यानुला चलाउन थाली । दुखाइले आमाको अनुहार छुँदै थियो । मैले आमालाई कपालमा सुमसुम्याउन थालेँ । बुढेसकालले हल्का खुम्च्याएको मेरी आमाको हातमा उसले अरू नसा खोज्न थाली । मलाई थाहा थियो ऊ नर्स थिई । तर, ऊ यो डिपार्टमा थिइनँ । मैले सोधेँ, ‘अबदेखि यतै हो तपाइँ ? ‘
‘हैन, आज साथी नआएकोले मात्र हो । म प्राय: म्याटरनिटी वार्डमा हुन्छ’, उसले भनी । उसले यतिभन्दा म उसको साथीप्रति कृतज्ञ हुन पुगेँ जो एकदिन नआउँदा यो सब भयो । उसले आमाको हातमा उपयुक्त नसा भेटिन । मैले नियतवश आफ्ना औंलाहरू आमाको हात हुँदै उसका औंलाहरू छुन पुगेँ । के थियो उसका औंलाहरूमा कुन्नि ! तिनलाई छुँदा मेरो जीउभरि अचम्मको कम्पन आएको थियो । कताकता उसको स्पर्शसँगै प्रितका कणहरू मेरा औंलाहरूमा सरेझैं महसुस भएको थियो । यतिबेला लाग्दैछ, ऊ एउटी काल सर्प थिई जसले मलाई क्षणभरमै डस्यो ।
उसको हेराइ, मुस्कान, आवाज, यी सबैको नशामा म पूर्ण रूपले डुबिसकेको थिएँ । योभन्दा पहिले यसरी कुनै युवतीको नशामा म परेको थिइनँ । म भित्रको हलचल उसले पनि बुझ्दै थिई । म जे भइरहेछु त्यसले उसलाई रमाइलो लागेको हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो क्याबिनमा आउने क्रम बढाउन थाली । ऊ आउँथी, निकैबेरसम्म कुरा गर्थी । मभन्दा बढी ऊ नै बोल्थी । म कम बोल्थेँ किनकि मेरा इन्द्रियहरू उसैलाई हेर्न, सुन्न र महसुस गर्न रुचाउँथे । ऊ बोलिरहँदा म उसलाई यसरी हेर्थेँ कुनै बेला ऊ आफैं आत्तिएर के कुरा गरिँदैछ त्यो नै बिर्सन्थी । यतिबेलासम्म उसले आफ्नो पारिवारिक वृत्तान्त सबै बताइसकेकी थिई । मध्यम परिवारकी थिई । बाबु सामान्य सरकारी जागिरे । आमा गृहिणी । तीन दिदीबहिनीमा माइली छोरी थिई ऊ । कपनमा बस्थी । स्टाफ नर्स बन्नु उसको सपना थियो । लगभग ऊ त्यही सपनामा रमाउँदै थिई ।
एकदिन हामी अस्पतालकै क्यान्टिनमा कफी गफ गर्दै थियौँ । ऊ निकै खुसी देखिन्थी । एउटी गर्भवती महिलाको ज्यान जानबाट जोगिएको कुरा सुनाई । अनि मैले सोधेँ, ‘बच्चा ? ‘ उसले भनी, ‘बच्चा त पहिले नै मरिसकेको थियो ।’ सोचेँ, सारा संसार जीवित कुराले नै त आकर्षित हुन्छ । उसले प्रसूति विभागमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छ त्यो खुलेर सुनाउँदै थिई । यही क्रममा उसले भनी, ‘एउटा मान्छेबाट दुइटा मान्छे बन्नु सजिलो कहाँ छ र ? ‘
मैले थपेँ, ‘यो त दुइटा मान्छेबाट तीन बन्नु हैन र ? ‘
उसले तुरुन्तै तर्क गरी, ‘मान्छे त आखिर आमाकै कोखमा बन्ने हो नि, हैन र ? ‘
उसले यसोभन्दा मैले मेरी आमालाई सम्झेँ जसले कोखमा मात्रै हैन, यो दुनियाँमा मलाई मान्छे बन्न अनेक संघर्ष झेल्नुभएको छ । म जुरुक्क उठेँ र क्याबिनमा लागेँ । ऊ सायद छक्क परी ।
आमा छटपटाइरहनुभएको थियो । ऊ पनि मेरो पछिपछि आएकी रहिछ ।
उसले अक्सिजनको पाइप मिलाई तर आमा अक्सिजन लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको थियो । मैले आमालाई बोलाएँ । आमाको आँखीभौं विस्तारै तलमाथि गर्‍यो । उहाँ वास्तवमा अन्तिमपल्ट सास फेरिरहनुभएको थियो । क्षणभरमै अरू पनि नर्स डक्टरहरू भेला भए । तुरुन्तै उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । त्यसको केहीबेरमै मेरी आमा रहनुभएन ।
पूरै सुनसान भो संसार । मेरो सामुन्ने आमासँगका ती क्षणहरू खेल्न थाले छाया भएर । छायामा, मेरी आमा अनि म । मलाई काखमा लिएर दूध चुसाउँदै गरेकी मेरी आमा, केहीबेरमै मेरो हात समाएर स्कुलको बाटो लाग्नुहुन्छ । म कक्षा कोठामा साथीहरूको टिफिनमा टोलाइरहेको हुन्छु त्यति नै बेला मेरी आमा हातमा टिफिन बोकेर आइपुग्नुहुन्छ । छुट्टीको घण्टी लाग्छ । सबैका आमाबुवाहरू गेटमा पहिले नै आएर छोराछोरीको बाटो कुरिरहेका हुन्छन् । त्यही भीडमा मेरी आमा पनि हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुग्नुहुन्छ र म आमाको चोरऔंला समातेर आमासँगै डेरामा फर्किन्छु ।
रातको पर्दा खस्छ । आमा मलाई कपालमा सुममुमाउँदै अनेक कथा सुनाउनुहुन्छ अनि म लुपुक्क आमाको अँगालोमा निदाउन पुग्छु । मस्त नीदमा डुबेको मलाई निद्रादेवीकै काखमा छोडेर उहाँ अर्को कोठामा जानुहुन्छ । निद्रादेवीले मलाई छोडेर जान्छे । म ब्युँझन्छु । उता कोठाबाट आमाको भारी सास मेरो कानसम्म ठोकिन्छ । म झसँग झस्किन्छु । यसपछि मेरो झस्किने क्रम दोहोरिरहन्छ ।
एकदिन मलाई उता कोठामा आमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो । ढोकानेर पुगेर आमा भन्दै बोलाएँ । एकाएक उहाँको सास शान्त भयो । तर, केही खसेजस्तो आवाज सुनेँ । मैले ढोका घचेटेँ । खुलेन । भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो । निकै बेर ढोकामा ढकढक गरेँ । अहँ, आमाले ढोकै खोल्नुभएन । त्यसपछि कहिल्यै पनि आमाको कोठाबाट कुनै त्यस्तो आवाज आएन ।
एकपटक म सिकिस्त बिरामी परेँ । मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने भनियो । आमासँग पैसा थिएन । त्यतिबेलै एकजना पुरुष आयो र केही रकम उहाँलाई दिएर गयो । सायद मेरो उपचार खर्च त्यसैबाट टरेको थियो । मलाई सञ्चो भएको केही दिनमै त्यो पुरुष हाम्रो घरमा आयो र मेरै सामुन्ने आमालाई तानेर कोठामा लग्यो । म पच्छ्याउँदै गएँ । ढोका बन्द भयो । अनि मैले सुन्न थालेँ त्यस्तै भारी सास ।
धेरैपछि मैले बुझ्न थालेँ आमाले के गर्नुहुन्थ्यो । हो, मेरी आमा मलाई हुर्काउन आफ्नो शरीरको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । यो लोग्नेमान्छेले जितेको समाजमा मेरी आमा एउटीमात्र होइनन् जसले आइमाई भएकै कारण यो सब झेल्नुपर्‍यो । सामूहिक बलात्कारको उपज हुँ म । एक साँझ बाटोमा हिँड्दै गर्दा उहाँ लुटिनुभयो । को को थिए उहाँ चिन्नुहुन्न । आफूमाथि पालैपालो उफ्रिरहेका तिनका अनुहार रातको अँध्यारोले लुकाइदिएको थियो । सम्झनुहुन्छ अँध्यारोमा ती लोग्नेमान्छेहरू ब्वाँसाजस्ता देखिन्थे । आमाको पेट बढ्दै गयो । मेरी आमा आफ्नै परिवारमा अटाउन सक्नुभएन ।
अन्तत: त्यागिदिनुभयो आफ्ना भन्नेहरू सबै । यी सबै पीडालाई बिर्सन मेरी आमाले आफ्नो शरीरलाई बजारमा राखिदिनुभो । यी कुराहरू मेरी आमाले कति सुन्दर अक्षरमा आफ्नो डायरीको पानामा लेख्नुभएको रहेछ जुन मैले कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने बेला चोरेर पढेको थिएँ । डायरीमा एउटा यस्तो वाक्य पनि थियो, ‘सन्तानको बाबु को हो भन्ने कुरा आमालाई मात्र थाहा हुन्छ रे । तर म आमा भएर पनि मलाई थाहा छैन मेरो छोराको बाबु को हो ? ‘
यतिबेला म आमाका निदाएका आँखाहरू पढ्दै थिएँ । उहाँसँगै निदाएका थिए मेरा बाबु पनि । किनकि मेरी आमा आमामात्र हुनुहुन्थेन, मेरो बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो र त, मैले कहिल्यै बाबुको अभाव महसुस गर्नु परेन । अहिले भने म नितान्त टुहुरो बनिसकेको थिएँ । आमाको शरीर छोएँ । झन्झन् पवित्र लागेर आयो । आमाको पवित्र शरीरलाई आर्यघाटमा जलाएर फर्केदेखिन् म पूरै एक्लो भएँ ।
मेरो एक्लोपनाले मलाई खाँदै थियो । यसबाट उन्मुक्त हुन मैले फेरि उही नर्सलाई खोज्न थालेँ । साँच्चीभन्दा मलाई उसको साथ आवश्यक हुन थाल्यो । जमिनमा त आवश्यकता नहुने झारबाहेक आवश्यक सबै नरोपी उम्रिँदैन । आवश्यक हुने चीज पाउन आफू होमिनै पर्छ ।
हिउँदमासको बिहान । चारैतिर हुस्सुको मस्ती थियो । प्रकृतिको क्यानभासमा ऊ आफैं जसरी मन लाग्छ उसरी पोखिएको थियो । कौसीको डिलमा उभेर पूर्वतिर हेरेँ । कपनको डाँडा देख्न सकिनँ । केही दिन भो यो डाँडालाई बिहान बिहान गम्लंगै छोपेर हुस्सुले सम्भोग गर्न थालेको । मलाई हुस्सुसँग भाउन्न भएको पनि केही दिन भयो । तल ओर्लें । मेरो बुलेट ढाड थापेर मलाई नै पर्खिरहेको थियो । चिसो लागिसकेछ यसलाई पनि र खोक्न थाल्यो । केहीबेर किक दिएपछि ऊ आफैं ताब्यो । एकपटक सुमसुमाएँ । टालोले पुछपाछ पनि गरेँ ।
निदाएको टोललाई ब्युताउँदै मेरो बुलेट कपनतिर हुइँकियो । बाटो छेक्न आएको हुस्सु आफैं टाढाटाढा हुँदै गयो । गुम्बा नजिक पुगेपछि उसलाई फोन गरेँ । मलाई थाहा थियो उसको बिदाको दिन हो आज । १५, २० मिनेटको अन्तरालमा आई ऊ । उ मलाई कल्पनाकाशको अप्सराभन्दा कम लागिन । उसका सुकुमेलजस्ता मसिना आँखा, पातला लालुपाते ओठ, टुसुक्क उठेको फुच्चे नाक सबैतिर मेसैसँग चुम्ने रहर बढेर आयो । हामी त्यतै नजिकैको डाँडामा चिसो हावा खाँदै, सुन्दर तर भित्रभित्र निसास्सिएको काठमाडौंलाई हेर्दै उभियौं । केहीबेरको कुराकानीपछि मैले सीधै ऊसँग प्रेम प्रस्ताव राखेँ । उसले नाइँ पनि भनिन हुन्छ पनि भनिन । कति कुरा मौनतामै सुरु हुँदा रहेछन् जसरी उसले केही नभनी पनि सुरु भयो हाम्रो प्रेम कहानी ।
म उसलाई अति नै चाहन्थेँ । अति नै माया गर्थँे । मलाई यस्तो लाग्थ्यो ऊ नै मेरो सबथोक हो । धर्ती हो, आकाश हो, संसार हो । हरपल, हरक्षण उसलाई आफैंसँग राख्न थाहन्थेँ म । मानौं, मैले अहिलेसम्म कमाएको सबैभन्दा महँगो चीज । मनले जे चीज खोज्छ त्यो चीज पाउनैपर्ने मेरो आदतसँग मेरी आमा पनि पटकपटक थाक्नुभएको मलाई राम्ररी याद छ । म अहिले जसरी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु सकेको छु त्यो पनि त मेरो आदतकै उपज हो । हो म जे खोज्छु त्यो पाएरै छोड्छु । मैले आमाको सुख चाहेँ । मेरो लागि त्यो सुख पैसामा थियो ।
दुनियाँले थुकेको मेरी आमालाई म त्यो सिंहासनमा राख्न चाहन्थेँ जहाँ उहाँले आफूलाई एउटा महलको महारानी सम्झन सक्नुहोस् । उहाँलाई यो अवस्थामा ल्याउन मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहिनँ । म छिटो छरितो पैसा कमाउने धन्दामा लागेँ । संयोगवश मैले एउटा त्यस्तो समूह भेटेँ जसको हात समातेर म पैसाको चंगुलमा छिर्न थालेँ । हो, मैले लागूऔषधको ओसारपसारदेखि लिएर सुन तस्करीसम्मको काममा दिलो ज्यान लगाएँ । मसँग भएको यो आलिसान बंगला, जग्गाजमिन, मेरो बैंक ब्यालेन्स सबैमा मेरो आफ्नै पसिना छ । मान्छेले यो उमेरमै सजिलै कसरी पैसा कमायो भन्छन् होला तर यति कमाउन मैले पनि कयौं जोखिम मोलेको छु । र पनि म त्यो भाग्यमानी दुई नम्बरी धन्दावाल हुँ जो जहिल्यै पुलिसको आँखामा परेन ।
हाम्रो प्रेमको यात्रा अगाडि बढिरह्यो । उसको आउने जाने क्रम बढ्दै गयो । दिनभर मसँग रहे पनि रातमा ऊ फर्कन चाहन्थी । तर, कैयौं रात मैले उसलाई जबर्जस्ती आफैंसँग राखेको छु । उसँग अलग हुँदाको क्षण कल्पना गर्दामात्रै पनि मेरो संसार पूरै अन्धकार भएको महसुस हुन्थ्यो । विस्तारै मैले उसलाई नर्सिङको काम छोडेर आरामले घर बस्न कर गरेँ । तर, उसले मानिन । भनी, ‘नाइँ, म यो काम छोड्न सक्दिनँ, किनकि म बिरामीलाई प्रेम गर्छु ।’
मैले ख्याल गर्दै भनेँ, ‘यदि बिरामीकै ख्याल गर्नु छ भने डक्टर बन न, म तिमीलाई डाक्टरी पढाउन पनि सक्छु ।’
उसले भनी, ‘डाक्टर आफ्नो ठाउँमा महान् होलान् तर बिचराहरूसँग बिरामीलाई प्रेम गर्ने समय नै हुँदैन… ।’
ऊ प्राय: यस्तै कुरा गर्थी । ऊ के सोच्थी, के चाहन्थी त्यो मेरो खोजीको विषय थिएन । मेरो लागि महत्वपूर्ण उसको उपस्थिति थियो । उसको सामीप्यता । उसको आलिंगन ।
आमाले छोडेर जानुभएको यो घरमा म उसलाई यति धेरै सुख दिएर सजाउन चाहन्थेँ । मेरो आशक्तिको पिरामिड अकासिँदै थियो । एकदिन उसले मध्यरातमा एसएमएस पठाई, ‘अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । मलाई तपाईको प्रेम भारी भयो । तपाईंको साथ साँघुरो भो ।’
म छाँगाबाट खसेँ झै भए । मैले फेरि मरिहत्ते गरेर प्रेमको भीख माग्न थालेँ । बुलेटको आवाजसँगै चिच्याउँदै ऊ बस्ने घर अस्पताल सबैतिर पच्छ्याउन थालेँ । मेरो हद देखेर उसले भनी, ‘यदि तपाईं मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, केही समय शान्त हुन दिनुस् ।’ यसपल्ट उसले भनेको मान्न मैले आफ्नो सनकपनलाई काबुमा ल्याउन कठोर प्रयास गरेँ । योसँगै मेरो बुलेटले पनि केही दिन आराम पायो ।
त्यसको केही समयपछि मैले उसलाई एकजना मान्छेसँग धुम्बाराही पार्कमा देखेँ । मेरा आँखाहरू एकाएक आक्रोशको रसले भिजे । मेरो सनकपना मुटु हुँदै मुठ्ठीसम्म पुग्यो । मैले आक्रोशले दाँत किट्न थालेँ । म चाहन्थेँ, मेरो मनमस्तिष्क सबै बटुलेर लानेलाई म त्यही सिध्याउन सकुँ । तर, म अगाडि बढिनँ । मलाई पूरा तयारीका साथ अगाडि बढ्नुथियो ।
हो, त्यो दिनदेखि म उसका हरचिजलाई घृणा गर्ने कोसिसमा छु ताकि म उसलाई सहजैसँग सिध्याउन सकुँ । त्यसैले म उसका आँखालाई सेता विषालु पुतली ठान्छु । उसको आवाजलाई किचकन्याको गीत ठान्छु । उसको मुस्कान एक जाल हो र उसको साथ एउटा अँध्यारो गहिराइ । म उसका यी सबैचीजले पागलजस्तै भइरहेछु । जबसम्म यी चिजहरूको अन्त्य हुँदैन मेरो मस्तिष्कका न्युरोनहरू एकअर्कासँग जुधेरै फुट्नेछन् । म यो परिस्थितिसँग हार्न चाहन्न । जित्नकै लागि म उसको हत्यारा हुन तयार हुँदै छु ।
कोठा सुनासान छ । भित्तामा एउटा पेन्टिङ छ । केही क्राइम उपन्यासहरू छरपस्ट छन् । मैले पढी सिध्याएका यी पुस्तकहरूको पानापाना खोज्दै म फेरि पढ्छु । हत्याका घटनामा विशेषगरी मेरो मस्तिष्क पोखिन्छ । हिजो अस्तिझैँ, आज पनि म उसलाई कसरी सिध्याउने उपायहरू खोज्दै छु । भर्खरै गुगलमा सर्च गरेँ । यो क्रम चलेको एक हप्ता भइसक्यो । उसलाई सिध्याउने कुरा गर्दागर्दै पनि म फेरि उसलाई मन पराइरहेकै हुन्छु । माया गरिरहेकै हुन्छु । त्यसैले म उसलाई कुनै पीडा नदिई मार्न चाहन्छु । अ पेन लेस देथ । यो कसरी गराउन सकिन्छ त्यो सोचिरहन्छु ।
खोजिरहन्छु । विभिन्न पोइजनका टप टेन नामहरू मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा देखिन्छन् । तर, मलाई सबैभन्दा उपयुक्त मेरै नाइन एमएम अमेरिकन पिस्तोल नै लाग्छ । जुन मैले लागूऔषधकै एउटा काम फत्ते गरेबापत एक विशेष व्यक्तिबाट उपहारस्वरूप सन् २०१५ पाएको थिएँ । मसँग भएका सामानहरूमा यो मेरो लागि निकै विशेष पनि हो । यही विशेष चिजले म मेरो विशेष मान्छेलाई सिध्याउने निर्णयमा पुग्छु । नबिराई म उसलाई एक राउन्ड गोलीमै सिध्याउँछु, दुखाइको महसुसै नगरी ऊ सदाका लागि बिदा हुनेछे । उसँगै बिदा हुनेछन्, उसका आँखाहरू, उसको आवाज, उसको स्पर्श । उसको साथले त मलाई छोडिसकेको थियो नै । यस्तै यस्तै कल्पना गर्र्दै, म म्याग्जिन भर्छु र पिस्तोलमा लोड गर्छु ।
मौसम चिसो छ । ओभरकोट लगाउने राम्रो मौका पनि हो यो । म आफ्नो कालो ओभरकोटको भित्री खल्तीमा गोली लोड गरिएको पिस्तोल घुसाउँछु र उसलाई एउटा मेसेज लेख्छु, ‘…तिमीलाई अन्तिमपटक भेट्न मन छ ।’
तुरुन्तै जवाफ आउँछ, ‘भन्नुस् कहाँ कति बजे… ? ‘
‘चुच्चेपाटी चोक, ३ बजे…’, म रिप्लाई दिन्छु ।
ऊ आउँछे । मेरो बुलेटमा बस्छे । पहिलेभन्दा असजिलरी । उसलाई लिएर म सुन्दरीजलको जंगलतिर हुइिकिन्छु । सायद सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामुले पछाडिबाट हेरिरहेकी हुन्छे । केही बेरपछि उसलाई पनि त म पासाङ ल्हामुकै संसारमा पुर्‍याउनेछु ।
हामी सुन्दरीजल ड्याम नजिक पुग्छौं । बाटोभरि न ऊ बोल्छे न म । ऊ ड्यामको डिलमा उभिन्छे । म उसको सामुन्ने । मेरा हातहरू थरर्र काँप्न थाल्छन् । उसका सुन्दर आँखाहरूले फेरि मलाई मोहित गर्न थाल्छन् । उसले मुस्कुराउँदै मैले भेट्नुको कारण सोध्छे । उसको मुस्कानले फेरि पनि मलाई पगाल्छ । मैले एक्कासि उसको हात समात्छु । उस्तै मुलायम् छन् ती हातहरू । ऊ अचम्मित भएर मलाई हेरिरहन्छे । मेरो मुखबाट तातो सास बहन्छ, ‘तिमीलाई अघाउञ्जेल हेर्न मन लाग्यो ।’
उसका आँखाहरूले सोधेझैं लाग्छ, ‘सधैं, किन तर्साउनुहुन्छ मलाई यो डरलाग्दो पे्रमको अश्त्रले ? ‘
उसलाई के थाहा यतिखेर म प्रेमको हैन घृणाको अस्त्र बोकेर हिँडिरहेछु ।उसलाई हेर्दै जान्छु । मेरो आवेग झन्झन् बढ्न थाल्छ । म फेरि लोभिँदै जान्छु उसका आँखा, उसका नाक, चिउँडो, छातीको लयसँगै । मेरो सास बढ्दै जान्छ ।
मेरो शरीर भिज्दै जान्छ आफैंभित्रको आवेगले । ऊ केही नचली ठिंग उभिरहेकी हुन्छे । बेलाबेला उसका दुबै हातका औंलाहरू एकअर्कासँग अँगालिन्छन् । ऊभन्दा मुनि पानीको दह गहिरो भएर उसैलाई नै कुरिरहेको हुन्छ । पानीको सतहमा चल्मलाइरहेको थियो उसकै प्रतिबिम्ब । मैले खुट्टाले ढुंगा हुत्याउँदै पानीमा खसालिदिन्छु । किनकि म उसको वास्तविक रूपको नशामै रमाउन चाहन्छु।
मलाई लाग्न थाल्छ उसलाई सिध्याउनु अघि, क्षणभर भए पनि तानेर जंगलको माझमा उसको सिकार गरुँ । भरपूर अघाएर मात्र उसलाई बिदा गरिदिऊँ । अनौठोसँग मभित्र रगतको बहाव बढ्छ । अचानक मेरा आँखाहरूमा तातो रगत छर्किएको भान हुन्छ । एकाएक म दृष्टिभ्रम हुन पुग्छु । टाउको झट्कारेर आफैंलाई नियाल्छु । ब्वाँसोभन्दा फरक पाउँदिनँ । ऊ बरु उस्तै छे । उसको वरिपरि मेरै अनुहारका थुप्रै ब्वाँसाहरू देख्छु ।
बीचमा ऊ शान्त भएर उभिएकी छे । एउटी सुन्दर देवीको प्रतिमूर्तिझैं लाग्छ । उसको अनुहारमा घरीघरी मेरी आमाको अनुहार आएर बसिदिन्छ । एकाएक म आफैंसँग क्रोधित हुन्छु । भएभरको घृणा जाग्छ आफैंप्रति । म सम्हालिन सक्दिनँ र ओभरकोटभित्र हात छिराएर पिस्तोल निकाल्छु । मेरो दायाँहातको चोर औंला र ट्रिगरबीच मलाई नै सिध्याउने सम्झौता भइसक्छ । म राम्ररी चाल पाउँछु मेरो दायाँ निधारमा पिस्तोलले मीठोसँग स्पर्श गर्दैछ… ।
सभार: अन्नपूर्ण पोस्ट
About मनिषा गौंचन
Manisha Gauchan is the author of two critically acclaimed novels named White Cane (Based on the story ofayoung man born with blindness), 2014 and Walliko Diary (based on the story ofayoung married woman), 2006 andapoetry collection Foolharuko Ranga Chhaina (Colorless flowers), 2004. She is alsoasocial worker, journalist and disability rights activist withaMaster Degree in Rural Development from Tribhuvan University. She has worked for numerous nonprofits in the field of human rights and disability, education and gender equality including: Nepal Disabled Human Rights Center (DHRC-Nepal), Sangya, Deep Jyoti women's group, Lashya women's group. She has worked asatelevision journalist at Avenues Television and currently involved as the Lead Radio Drama Writer/Co-Producer for Antenna Foundation Nepalareputed nonprofit organization in the field of media. She is founding member of Sakshayam Foundation. Asafilmmaker, she has worked as location producer, script writer, translator, narrator and field interviewer on several independent documentaries focused on human rights issues. Asapublished writer she is recognized for her ability to write about social justice issues from the perspective of individuals, their struggles and personal stories. She is actively engaged in the empowerment of people with disabilities, women and her work and writings reflect her ability to collaborate and deeply engage with her subjects.
View all posts by मनिषा गौंचन →